Tag: dhijitari aseti manejimendi | Martech Zone
Tag: dhijitari asset manejimendi
DIgital Asset Management (DAM) mapuratifomu anga aripo kweanopfuura makore gumi, zvichigonesa makambani makuru kuchengeta, kubata, kuronga, nekuparadzira mafaira avo anotenderwa maficha enhau. Heino huru inotsanangudza vhidhiyo yemabatiro anoita Imagen mabrandhi kunyorera mukati nekugadzirisa zvinhu zvavo: Imagen inopa maviri zvigadzirwa zveDAM: Imagen Go An agile digital aset management platform yekuchengetedza nekuronga yako ese vhidhiyo uye akapfuma midhiya zvemukati. Inowanikwa kure kubva kune chero chinhu chakabatana kuti iwe
Chitatu, Kukadzi 10, 2021 Chitatu, Kukadzi 10, 2021 Amalie Widerberg
Kufamba kuenda muna 2021, kune zvimwe zviitiko zviri kuitika muindasitiri yeDhijitari Asset Management (DAM). Muna 2020 takaona shanduko dzakakura mumashandiro nemaitiro evatengi nekuda kwecovid-19. Sekureva kwaDeloitte, huwandu hwevanhu vanoshanda kubva kumba vakapetwa kaviri muSwitzerland panguva yedenda. Kune zvakare chikonzero chekutenda kuti dambudziko richakonzera kuwedzera kusingaperi kwebasa riri kure pasirese pasirese. McKinsey zvakare akataura nezvevatengi vachisundira kwakanangana ne